Maaliif yeroo garaa garaatti akka J/Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMaaliif yeroo garaa garaatti akka J/Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?
Maaliif yeroo garaa garaatti akka J/Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?
Maaliif yeroo garaa garaatti akka Jaal Marroon Wareegameetti PP/Nafxanyootaan dubbatamaa?
Gidduu kana magaalaa Dambii Doolloo keessaatti akka Jaal Marroon dhibee Onneetiin yaalaa dhabee lubbuun darbeetti uummata burjaajessaa turaan. Odeessaa kana torbee darbee keessaa Dambii Doolloo irraa uummaata keessaa na gaaffatanii turaan. Network Dambii Doolloo irraa badee waan jiruuf, akka yaalaa dhabee dhibee Onneetiin Jaal Marroon lubbuun darbeetti uummata hedduu oduu dhaan gurraa buusaanii, uummataa yaadaan cabsuu yaalaa turaan.
Ni yaadattuu yoo ta’ee, ji’oota dheeraan dura ammoo Jaal Marroon wareegameera jechuun suuraa ta’ee miidiyaa gubbaa facaasaa turaan. Boodaas guyyoota garaa garaa takka qabamee, takka rukkutamee, takka wareegamee jechuun uummata burjaajessuu yaalaa turraan. Odeessii guyyaa har’aa miidiyaa raasaa jiruus qaamuuma dubbii kanaati.
Xiyyeeffannaan ijoon ajaandaa kanaa, akka Jaal Marroon miidiyaalee garaa garaa irratti dubbatuu gochuun midiyaalee irraa jireessaan bilbila gara sanaatti ergamaan hordoofuu danda’aanii irratti akka dubbatee, booda saraaraa bilbila isaa hordoofuun GPS dhaan yaalii marsaa lammaffaa gochuuf kan akeekamee dha.
Sagantaa VOA-Afaan Amaaraa irratti gaaffii fi deebii Jaal Marroo waliin godhamee, boodaa taatee ta’ee namootni itti dhiyeenyaan beektaan ni yaadattu. Wareegamni hagaamii kaffalamuun, operationiin diinaa suun akka fashalaa’ee, miseensonni itti dhiyeenyaan beektaan ni yaadattu.
Haqa tokko hubachuu kan qabdaan, hoggaantoota WBO mitii, miseensi WBO’n gameessaa hin taanee iyyuu ajandaa diinaa duukkaa waan raaffamaan hin qaban. Yeroo fi haalaa, darbees eessaattii dubbachuu akka qabaan gaarii godhaanii ni beeku.
Ijaarsii mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoos, caasaalee bifa garaa garaan mooraa firaa fi diinaa keessaatti ijaaramanii fi of-ijaaraanii jiraaniin wal dubbiisaa kan deemuu waan ta’eef, ajjandaan diinaa miseensa Waraanaa Bilisummaa Oromoo fis ta’ee Qeerroo Bilisummaa Oromoof dhoksaa hedduu hin qabu.
Eden Dambii dhaan,
Odeessa humna tikaa Tamasgeen Xurunaa keessa argame
Dubbiin Marroo ajjeefne jettu, Marroo Bilbilaa dubbachiisuun CALL triangulate gochuuf SHIRA ta’e dha.
Mariin isaas mooraa waraana Bishooftuutti bal’inaan mari’atameera.
Miidiiyaalee dhugoomfachuuf tattafannaa yoo godhan kiyyeeffachuuf akka ta’ee nutti qicee jira.
Enginin Qeerroo yeroo amma kana rakko cimma irraa akka jirrani dha gabasan tokko akka nuf gabaseeti
Enginin Qeerroo yeroo amma kana rakko cimma irraa akka jirrani dha gabasan tokko akka nuf…
Jaal Marroon Kunuusifamuu Qaba!
Jaal Marroon Kunuusifamuu Qaba! Damee Boruu: 1/19/2019 Jaal Marroon ija firaa fi diinaa keessa seenee…
Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne
Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne BBC: Dhaloota Fidalaafi Dhaloota…
The war between Sudan and Ethiopia over El-Fashaga Triangle.